Sangoma – iAfrika
Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo, kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu, uzofinyelela izinhloso zakho empilweni, othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki, noma uwa phansi, kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla, kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane. iAfrikaiAfrika project
Tags Amaphupho ngokugibela, Inyanga, Sangoma, Ulwazi
Uma uphupha ukuthi uthukuthele, ngemvamisa kusho ukuthi kunebhadi ekusaseni lakho. Uma ucikekile nje kancane, kusho ukuthi uzothola izindaba ezimbi maduzane, kodwa uma umuntu ekuthukuthelise ngempela uzohlulwa yizitha zakho. Uma uthukuthele ngoba kunomuntu okuthukile, kuzoba nokulwa nophathina wakho noma ebhizinisini lakho. iAfrikaiAfrika project
Tags Amaphupho ngokuthukuthela, Inyanga, Sangoma, Ulwazi